चाडपर्वसँगै सार्वजनिक यातायातमा निगरानी, चाडपर्वमा मात्र निगरानी किन ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
चाडपर्वसँगै सार्वजनिक यातायातमा निगरानी, चाडपर्वमा मात्र निगरानी किन ?
काठमाडौं । चाडपर्व शुरु भएसँगै जिल्ला भित्रने र बाहिरनेको सवारी साधानको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । रोजगारीको सिलसिलामा यहाँ रहेका र अध्ययनका क्रममा जिल्ला आएका घर फर्कन शुरु गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले कोरोना त्रासले यसपाली यात्रुको चाप खासै नरहेको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइए तत्कालै जरिवाना गरिने बताउनुभयो । उनले बताए, “प्रशासनले तत्काल कारवाही गर्न प्रहरी युनिटलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।” यात्रु, चालक, सहचालक सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै शर्माले अटेर गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए।
चााडपर्वका बेला एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँसम्म मानिसको आवतजावत हुने भएकाले कोरोना सङ्क्रमण फैलिने उच्च जोखिम देखिन्छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्टले बिहीबारदेखि सार्वजनिक सवारीमा आकस्मिक जाँचको अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । जिल्लाका चार स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरी काम भइरहेकको उहाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार बढी भाडा लिने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्नेलाई तत्कालै कारवाही गरिने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस किन मनाइन्छ ‘नो पेन्टी डे’?
३०,आश्विन.२०७७,शुक्रबार १२:४१ मा प्रकाशित
← कपडा पेल्ने मेसिनमा हात च्यापिएर एक किशोरको मृत्यु
सरकारले किन लुकायो कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या →